Myanmar Youth Media Club - MYMHOT - Pirate Bay Founder Arrested for Alleged Hack mymclub.netSong of the Day Pimp Us Sitemap Get InvolvedApply for Got Talent? Apply to beaDJ Apply for MYMC Mob ဆက်သွယ်ရန် Sharing is Caring Embed for MYMC Radio Radio Playlists အင်တာဗျူးHip Hopချစ်စိုး SZ (B-Lord) ရသ J Me ဇေရဲ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ9One | G Family Bobby Soxer Hlwan Paing | Rock $tar စန္ဒီမြင့်လွင် Snare Modelချမ်းချမ်း မိုးယုစံ နေတိုး ဖွေးဖွေး Jenny RockIdiots Band မိုးမိုး Reason Band Pop / RnB / Otherသိန်းလင်းစိုး သီရိ ဖြိုးဝေ သားကြီး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Bunny Phyo ရေဗက္ကာဝင်း အေသင်ချိုဆွေ သီရိဆွေ နိုင်းနိုင်းစနေ L လွန်းဝါ L ဆိုင်းဇီ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) Ar T တွေးမိသမျှEnglish ချစ်သူစိတ်ဆိုးနေလား အခန်းနီ (Jily) နှင်းဆီနီနီသက်သေတည်လျက် မြန်မာ့ဂီတရေစီကြောင်းအနှစ်၂၀ ဆုံနေကျ လပြည့်ည ချစ်ခြင်းသံစဉ် ထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းည HappyNewYear ချစ်သူ ကမ္ဘာပျက်ည၏ တစ္ဆေကလဲ့စား Bus ကားပေါ်ကအလွဲများ Facebook မှာ ဓါတ်ပုံတင်မယ် စပ်မိစပ်ရာ တိုလီမုတ်စ ပုံသွင်းသူများ ဂိမ်းPortal Flash Demolition City ProgramsMYMC တစ်နှစ်ပြည့် BD 2010 Valentine's Special Singapore မှာ ပညာရှာ MYMC Singapore Pool Party MYMC ရေဒီယိုအထူးအစီစဉ် ရယ်မောစရာ MYMC on Voice of America Mother's Day 2010 Helping Hands Helping Hands2Valentine လက်ဆောင် Favorite DJ MYMC ၂ နှစ်ပြည့် နှင့် Song Helping Hands3We Rock With Skype Got Talent? us VS them Helping Hands4MYMSTARPo Po ထိုက်ထိုက် နေခြည် MiMi Akemi MYMC 2nd Theme Song Random Madness MYMC လေးနှစ်ပြည့် BD TechSong Download Trick Non-iPhone Stream iMYMC MYMC Persona for Firefox Ringtones စာမျက်နှာ Wallpapers (2010) MYMC Toolbar 2.0 MYMC Radio Embed Code Android for MYMC Radio Radio တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လဲ Knowledge101Miley Cyrus Adolf Hitler Diego Forlan ဦးသန့် UFO Bill Gates ဘဘဦးသုခ David Copperfield The Most Extreme: Speed Christmas Bermuda Triangle ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၂ Albert Einstein America’s Serial Killers! Mahatma GandhiMahatma Gandhi 1 Mahatma Gandhi2Seven Wonders Of The World Steve Jobs Mymhot Wall Skip to content
Pirate Bay Founder Arrested for Alleged Hack The Pirate Bay ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Gottfrid Svartholm အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် ကျခံစေဖို့ ဆိုင်းငံ့ခံ ထားခြင်းဟာ Pirate Bay file Sharing လုပ်ငန်း အတွက်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင် နိုင်ငံရဲ့ သတင်းမီဒီယာ တွေကတော့ Svartholm ကို ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံမှာ အကျဉ်း ချထားခြင်းဟာ Logica လို့ခေါ်တဲ့ ဆွီဒင် company တစ်ခုကို 2010 တုန်းက hack ခဲ့ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ် နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ Logica companyဟာ IT company တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆွီဒင် နိုင်ငံရဲ့ အကောက်ခွန် ရုံးကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။ ဒီနှစ်ဦးပိုင်းမှာ ဆွီဒင်လူမျိုး လူအယောက် ကိုးထောင် လောက်ရဲ့ အခွန် ဆောင်ထားတဲ့ နံပတ်တွေ online မှာပြန့်သွား ခဲ့ပါတယ်။ အခြား ဆွီဒင်လူမျိုး နှစ်ယောက်ကလဲ Logica company ကို hack အလုပ် ခံရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖမ်းခံ ရပါတယ်။
The Pirate Bay file sharing ကိုလုပ်ဆောင် နေခြင်းကြောင့် ပြစ်မှု ထင်ရှားတဲ့ လူလေးယောက်မှာ Fredrik Neij ကို ထောင်ဆယ်လ၊ Carl Lundstrom ကိုထောင်လေးလနဲ့ Gottfrid Svartholm ကိုထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်တိတိ ချမှတ်ဖို့ ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး တရားရုံးတော်က ထောက်ခံ ချက်ပေးလိုက် ပါတယ်။
သူတို့ဟာ file သန်းပေါင်း ၆.၈မီလီယံခန့်ကို တရားမ၀င် share လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထောင်ဒဏ်ကိုတော့ မကျခံကြ ရသေးပါဘူး။
game တွေ ရုပ်ရှင်တွေ software တွေနဲ့ သီချင်းတွေကို download ရယူနိုင်အောင် လမ်းညွှန် ပေးတဲ့ torrent-based file sharing site ကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့ တရားမမှုနဲ့ ဥပဒေ ချိုးဖောက် မှုတွေနဲ့ ငြိစွန်းခြင်း ကြောင့် ရုပ်ရှင်ဂီတနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ အစိုးရကိုယ်စား သူတို့ကို တရားစွဲ ဆိုပြီး 2009 ခုနှစ်တုန်းက ဆွီဒင်မှာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဲ့ပါတယ်။
file sharing မှာ bit torrent protocol တွေအလုပ် လုပ်တဲ့ ပုံစံအရ ခိုးပြီးအ share ခံရတဲ့ material ဟာ pirate bay ရဲ့ server တွေကိုလဲ ဖြတ်မသွားသလို server မှာ upload လုပ်ပြီး သိမ်းထားတာ လဲမဟုတ်ပါဘူး။ site မှာက torrent fileတွေရှာပြီး user တွေကို ဘယ်သူတွေက သူတို့လိုချင်တာကို share ပေးမယ့် အညွှန်းတွေ ကိုပဲ သိမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဲ သူတို့ရဲ့ file service ကို သန်းပေါင်း များစွာ အသုံးပြုကြပြီး သူတို့ရဲ့ ပုန်ကန်ချင်တဲ့ သဘောသဘာဝကြောင့် နာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Svartholm ကို ဖနွမ်းပင်မြို့က သူ့တိုက်ခန်းမှာ ဖမ်းလိုက်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အာဏာပိုငိတွေ ကတော့ သူ့ကို နောက်ဆုံးမှာ ဆွီဒင်ပို့မယ် လို့ပြောပါတယ်။ ဆွီဒင်မှာ သူဟာ hacking charges တွေကို ပေးဆောင် ရဖွယ် ရှိပါတယ်။ Swedish website ဖြစ်တဲ့ DN.se က Svartholm ဟာ မကျန်းမမာ ဖြစ်ပြီ့း ကိုယ်အလးချိန် ကလဲ ကီလို ၄၀ တောင်မပြည့် တော့ဘဲ မူးယစ်ဆေး သုံးတဲ့ ပြသနာလဲ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Written by Kyi Kyi Zin, Images from Google Search, Source : wired.com
Bruce Willis isn't suing Apple over iTunes RightsGangnam Style's Invisible Horse Dance Surprise! Avril & Chad To Get Married!
Facebook Facebook Massive Privacy Changes Author Administrator	Facebook က သူ့ရဲ့သက်တမ်း တလျှောက်မှာ အကြီးမားဆုံးလုံခြုံ ရေးစနစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတစ်ခု ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။	Read more
Facebook Massive Privacy Changes
Youtube 1080p Videos Are Going 3D Author Administrator	3D ကိုလူတွေကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ပိုင်းတွေမှာ တစ်ခေတ်ဆန်းထလာတော့ ဒီနေ့ Youtube ကသူတို့ ကြေငြာချက်မှာ 1080p နဲ့တင်တာတွေ 3D ပြောင်းသွားမယ် လို့ပြောပါတယ်။	Read more
Youtube 1080p Videos Are Going 3D
Sara To Replace Siri On Older iPhones Author Administrator	Siri က iOS5နဲ့အထက်ရှိတဲ့ Device တွေမှာမှ လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးလို့အဆင်ပြေတာပါ။ ဒါပေမဲ့တခြား iOS Version တွေနဲ့ ပိုအဆင် ပြေနေတဲ့ iPhone သုံးသူတွေအတွက် Siri အစားထိုး Sara ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီ။	Read more
Sara To Replace Siri On Older iPhones
Difference Between Good and Bad Ram High Usage Author Administrator	RAM ကိုအလွန်အကြူး သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးက သင့်ကွန်ပျူတာ အပေါ်ဘယ်လို အကျိူး သက်ရောက် မှု ဖြစ်စေပါ သလဲ။ Read more
Difference Between Good and Bad Ram High Usage
Content View Hits : 8501020